ओली विदेश उडेलगत्तै किन एकाएक स्वदेश फर्किए प्रचण्ड ? यस्तो छ कारण — Sanchar Kendra
ओली विदेश उडेलगत्तै किन एकाएक स्वदेश फर्किए प्रचण्ड ? यस्तो छ कारण
काठमाडौं । पार्टी अध्यक्ष तथा प्रधानमन्त्री केपी ओली सिंगापुर उडेलगत्तै सत्तारुढ दलका अर्का अध्यक्ष प्रचण्ड नेपाल फर्किएका छन् । पारिवारिक भ्रमणका लागि दुबई गएका प्रचण्ड गएराति स्वदेश फर्किएका छन् । बिरामी पत्नी सीता दाहाललाई लिएर प्रचण्ड गत मंगलबार दुबई घुम्न गएका थिए । पुत्र प्रकाश दाहालको वियोगमा विचलित सीता जीवनभर निको नहुने रोग प्रोग्रेसिभ सुप्रान्युक्लियर पाल्सी (पीएसपी) बाट पीडित छिन् । सीताको मन बहलाउन प्रचण्ड बेला–बेलामा विभिन्न ठाउँमा घुम्न निस्किन्छन् । उनीहरुको दुबई भ्रमण पनि त्यसैको निरन्तरता भएको प्रचण्डको सचिवालयको भनाइ छ । प्रचण्डको प्रेस सल्लाहकार विष्णुप्रसाद सापकोटा (जुगल)ले सीताको स्वास्थ्य सामान्य रहेको बताए । दुबईबाट फर्किएका प्रचण्डलाई स्वागत गर्न ऊर्जामन्त्री वर्षमान पुन, पर्यटनमन्त्री योगेश भट्टराई, खानेपानी तथा सरसफाइ मन्त्री विना मगरलगायत त्रिभुवन अन्तर्राष्ट्रिय विमानस्थल पुगेका थिए ।
भ्रमणका क्रममा प्रचण्डले पाम जुमेरास्थित एट्लान्टिस होटेलमा भारतीय नेताहरूसँग ‘गोप्य’ भेटगरेको बताइएको छ । पाँच दिनसम्म बस्दा प्रचण्डले भारत सरकार र सत्तारुढ भारतीय जनता पार्टीका प्रभावशाली नेताहरूलाई भेटेको बुझिएको छ । प्रचण्डलाई केहिदिन अघि मात्रै उनकै निवास खुमलटार पुगेर भारतीय खुफिया एजेन्सी ‘रअ’ का प्रमुख सामन्तकुमार गोयलले भेट गरेका थिए । सोही भेटमा भएका केही सहमतिलाई निष्कर्षमा पु¥याउन प्रचण्डले दुबई रोजेको स्रोतको दाबी छ ।
यसअहि शनिबार राति नै प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओली सिंगापुर प्रस्थान गरेका छन् । स्वास्थ्य परीक्षणका लागि उनी राति १० बजे सिल्क एयरबाट त्यसतर्फ गएका हुन् । उनले सिंगापुरस्थित ‘नेसनल युनिभर्सिटी हस्पिटल’ (एनयूएच) मा स्वास्थ्य परीक्षण गराउने छन् । प्रधानमन्त्रीसँग उनकी पत्नी राधिका शाक्य, प्रमुख राजनीतिक सल्लाहकार विष्णु रिमाल, निजी चिकित्सक डा. दिव्यासिंह शाहसमेत गएका छन्। उनी स्वास्थ्यमा समस्या थपिएपछि परीक्षणका लागि सिंगापुरको अस्पताल गएका हुन्। गत शुक्रबार सैनिक अस्पताल छाउनीमा स्वास्थ्य परीक्षण गरेपछि चिकित्सकले उनलाई सिंगापुर जान सुझाव दिएका थिए। ओलीले १२ वर्षअघि भारतमा मिर्गौला प्रत्यारोपण गरेपछि नियमित स्वास्थ्य परीक्षण गराउँदै आएका छन्। यसअघि उनी नियमित स्वास्थ्य परीक्षण गराउन थाइल्यान्ड गएका थिए। प्रधानमन्त्री ओली नियमित स्वास्थ्य परीक्षण गरेर एक सातापछि स्वदेश फर्कने कार्यक्रम छ।